နို့တိုကျမမေမြေားနဲ့ တားဆေးရှေးခယျြမှု – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
All Articlesကိုယျဝနျဆောငျနှငျ့မိခငျ ကနျြးမာရေးမြိုးဆကျပှားကနျြးမာရေးမိခငျနှငျ့ကလေးကနျြးမာရေး
မီးဖှားပွီး အူဝဲလေးကို မိခငျနို့ခြိုတိုကျကြှေးနခြေိနျမှာ အီစထရိုဂငျြဟျောမုနျးပါဝငျတဲ့တားဆေးသုံးမယျဆိုရငျ နို့ထှကျနညျးသှားနိုငျတာကွောငျ့ … အီစထရိုဂငျြပါတဲ့တားဆေးမြိုးကို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။
ဒါဆို နို့တိုကျမမေတေို့ ဘယျလိုတားဆေးမြိုးရှေးခယျြသငျ့လဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ!
(သတိ – မီးဖှားပွီး ၄၅ ရကျ အတှငျး အမြိုးသားနဲ့အတူမနရေပါ)
၄၅ ရကျကြျောပွီးရငျတော့ ဒီလိုသားဆကျခွားနညျးလမျးတှေ သုံးနိုငျပါတယျ….
ဤသားဆကျခွားနညျးဟာ မိခငျနို့ထှကျအားအပျေါ သကျရောကျမှုမရှိတာကွောငျ့ နို့တိုကျမိခငျတှမှော စိတျခစြှာသုံးနိုငျပါတယျ။ ကလေးမှေးပွီးပွီးခွငျးမှာ သားအိမျထဲ တဈခါတညျးထညျ့နိုငျသလို မီးဖှားပွီး ၄၅ရကျအကွာ ရကျခြိနျးပွနျပွမှ ထညျ့လညျးရပါတယျ။
အမြိုးသားသုံးကှနျဒုံး၊ အမြိုးသမီးသုံးကှနျဒုံး၊သုတျပိုးသတျဆေးမြား၊ သားအိမျခေါငျးအစှပျမြားဟာ မိခငျနို့အပျေါ သကျရောကျမှုမရှိတဲ့အပွငျ လိငျမှကူးစကျတတျသောရောဂါပိုးတှကေိုလညျး ကာကှယျပေးနိုငျတာကွောငျ့ နို့တိုကျမိခငျမြားရှေးခယျြနိုငျတဲ့ သားဆကျခွားနညျးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။
မီးဖှားပွီး ၄၅ ရကျပွညျ့ရငျ သုံးလခံဒကျပိုတားဆေးထိုးနိုငျပါတယျ။
နစေ့ဉျသောကျဆေးကဒျတှထေဲမှာမှ အီစထရိုဂငျြနဲ့ပရိုဂကျြစတုနျးအရောမဟုတျဘဲ ပရိုဂကျြစတုနျးသီးသနျ့ပါတဲ့တားဆေးမြိုးသောကျနိုငျပါတယျ။
မီးဖွားပြီး အူဝဲလေးကို မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန်မှာ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းပါဝင်တဲ့တားဆေးသုံးမယ်ဆိုရင် နို့ထွက်နည်းသွားနိုင်တာကြောင့် … အီစထရိုဂျင်ပါတဲ့တားဆေးမျိုးကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။
ဒါဆို နို့တိုက်မေမေတို့ ဘယ်လိုတားဆေးမျိုးရွေးချယ်သင့်လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်!
(သတိ – မီးဖွားပြီး ၄၅ ရက် အတွင်း အမျိုးသားနဲ့အတူမနေရပါ)
၄၅ ရက်ကျော်ပြီးရင်တော့ ဒီလိုသားဆက်ခြားနည်းလမ်းတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်….
ဤသားဆက်ခြားနည်းဟာ မိခင်နို့ထွက်အားအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့် နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ စိတ်ချစွာသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးပြီးခြင်းမှာ သားအိမ်ထဲ တစ်ခါတည်းထည့်နိုင်သလို မီးဖွားပြီး ၄၅ရက်အကြာ ရက်ချိန်းပြန်ပြမှ ထည့်လည်းရပါတယ်။
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး၊သုတ်ပိုးသတ်ဆေးများ၊ သားအိမ်ခေါင်းအစွပ်များဟာ မိခင်နို့အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့အပြင် လိင်မှကူးစက်တတ်သောရောဂါပိုးတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် နို့တိုက်မိခင်များရွေးချယ်နိုင်တဲ့ သားဆက်ခြားနည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
မီးဖွားပြီး ၄၅ ရက်ပြည့်ရင် သုံးလခံဒက်ပိုတားဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ်တွေထဲမှာမှ အီစထရိုဂျင်နဲ့ပရိုဂျက်စတုန်းအရောမဟုတ်ဘဲ ပရိုဂျက်စတုန်းသီးသန့်ပါတဲ့တားဆေးမျိုးသောက်နိုင်ပါတယ်။